युएईको रोयल गार्डमा कसरी जान सकिन्छ ? के के छन् मापदण्ड ? थाहा पाउनुहोस ।
काठमाडौं : युएई पुग्ने वा युएई पुगेका जो कोहिको एउटा सपना भनेको दुबईको रोयल गार्डमा काम गर्न पाउनु एक हो । आकर्षक तलब , राम्रो सुबिधा र सहज कामको कारण दुबईमा रहने वा दुबई जाने जो कोहिको लागि रोयल गार्डमा काम गर्ने सपना रहेको हुन्छ ।
रोयल गार्ड भनेको के हो?
रोयल गार्ड युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) संगै कतार, न्यूजील्याण्ड, स्विट्जरल्याण्ड र साउदी अरब, युके जस्ता देशहरुमा प्रचलित छन् । रोयाल गार्डमा हालका दिनमा भुपु सेना वा प्रहरी मात्रै होइन सर्वसाधारण समेतलाई लिने गरेको छ भने केहिले सैनिक तालिम लिएको प्रमाणपत्र पेश समेत गर्ने गरेको जानकारहरु बताउछन् ।
पूर्व सेना वा प्रहरी अधिकारीहरु वा सैन्य तालिम लिएको
उचाइ ५.७ इन्च
अंग्रेजी दक्षता राम्रो भएको
रोयल गार्डको चयन प्रक्रिया तीन किसिमले गरिन्छ । पहिलो त शारीरिक परिक्षण, चिकित्सा परिक्षण जसमा तपाइको कुनै दृघरोगको परिक्षण गरिन्छ र अन्तिम अन्तर्वार्ता लिइन्छ । नोट : यी जानकारीहरु रोयल गार्डमा काम गरेका र विभिन्न स्रोतबाट लिइएको हो । समयानुकूल विभिन्न कुराहरु परिवर्तन समेत भएको हुन सक्छ त्यसैले सम्बन्धित निकायको जानकारी नै अन्तिम हुनेछन् ।
२०७८ श्रावण २६, मंगलवार २३:५९ गते0Minutes 747 Views
इजरायल रोजगार – २ हजार ६९६ आवेदन अस्वीकृत, २८ गतेको परीक्षाको लागि १० नियम !
इजरायल रोजगारी – अंग्रेजी भाषा परीक्षाका लागि ११ वटा केन्द्र तोकियो, यी हुन् परीक्षा केन्द्र !
रोमानियामा नेपाली पुरुषका लागि खुल्यो रोजगारीको अवसर, यस्तो छ तलव दर !